Funny Ola Panda Onye Ego Ego Piggy Banks Boxes Toy
Agba dị ka ngosi
dị ka ngosi
Funny Ola Panda Thief Money Piggy Banks Boxes Toy - as show na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Model Number: ego igbe piggy bank
-enwe mmetụta: ego igbe piggy bank
Ihe: ABS + components electronic Easy to install
Kwesịrị ka batrị 2 x AA (ghara ịgụnye).
Onyinye zuru oke na-azọpụta ego maka ụmụaka
Otu n'ime ụlọ akụ kachasị mma n'ụwa.
Ụlọ akụ zuru oke maka ụlọ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ.
Na-agba ọsọ na 2 * Batrị AA (ejighi ya).
Tinye mkpụrụ ego gị na efere ọcha, panda ga-ejide ya.
Nakwa nnukwu onyinye maka ụmụaka.
ezi ego! mma ugbu a. nkwakọ ngwaahịa ngwangwa.
ihe natara na ezigbo ọrụ na ezigbo nkwakọ ngwaahịa.
dị oke mma ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Hot recu Ọrụ zuru oke Funny